Sadarkaa addunyaatti dhaabbileen hojii odeeffannoo mirkaneessuu hojjetan heddutu jiru. Ergaa Wiixataa keenya har’aatin dhaabbilee kunneen keessaa muraasa isinif dhiyeessina. – ኢትዮጵያ ቼክ
Sadarkaa addunyaatti dhaabbileen hojii odeeffannoo mirkaneessuu hojjetan heddutu jiru. Ergaa Wiixataa keenya har’aatin dhaabbilee kunneen keessaa muraasa isinif dhiyeessina.
1. Politifaakt (https://www.politifact.com/): dhaabbatni Politifaakt bara faranjootaa 2007 kan hundeeffame yemmuu ta’u gulaaltotafi gaazexeesitootaan hojii odeeffannoo mirkaneessuu hojjeta. Dhaabbatichi siyaasa biyya Ameerikaa irratti xiyyeeffata. Haasaa namoota siyaasaa hordofuufi qorachuun hagam dhugaqabeessa akka ta’an mirkaneessa.
2. Faakt Cheek Dot Org (https://www.factcheck.org/): dhaabbatni kun dhimmoota siyaasaa irratti xiyyeeffachuun odeeffannoowwan burjaajiifi sobaa filattootaaf dhiyaatan mirkaneessa. Dhimmoota odeeffannoon sobaa irratti dhiyaate ilaalchisees odeeffannoo dhuga qabeessa ta’e ni kenna. Dhaabbatichi beeksisawwan, haasaawwan, falmiiwwan akkasumas gaafif deebiiwwan irratti xiyyeeffachuun odeeffannoo mirkaneessa.
3. Faakt Cheekar/Waashingitan Post (https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/): tajaajilli odeeffannoo mirkaneessuu kun bara faranjoota 2007 kan eegalame yemmuu ta’u xiyyeeffannoon isaas filannoo prezidaantummaa Ameerikaa bara 2008 adeemsifame irratti ture.
Dhaabbatichi haasaa namootni siyaasaa taasisan hordofuun dhugummaa isaanii mirkaneessa. Dabalataan dhimmoota ciccimoofi burjaajii uuman irratti xiinxala bal’aa taasisuun dubbistootaaf dhiyeessa.
4. ‘AFP Fact Check’ (https://factcheck.afp.com/): biyya Faransaay keessa bara 2017 hundeeffame. Yeroo ammaattis biyyaalee garagaraa keessatti waajjiraalee banachuun odeeffannoowwan mirkaneessa.
5. Buhaarii Meetir: hojiin ijoo dhaabbata kanaa pirezidaantii Naayijeeriyaa Muhaammaduu Buhaarii irratti xiyyeeffata. Dhaabbatichi murteewwanfi sochiilee pirezidaantichaa hordofuun wantoota pireezidaantichi waadaa galanii turan walin walbira qabuun dubbistootaaf dhiyeessa.
6. Afriikaa Cheek (https://africacheck.org/): dhaabbata walabaa hojii odeeffannoowwan mirkaneessuu hojjetudha. Afriikaa Cheek bara faranjootaa 2012 kan hundeeffame yemmuu ta’u waajjirri mummeen isaa Afriikaa Kibbaatti argama. Dabalataan Keeniyaa, Naayijeeriyaa, Senegaalfi Inglaand keessaayis waajjiraalee qaba. Hojiin ijoo dhaabbatichaa odeeffannoo mirkaneessuufi waadaawwan qaamoleen mootummaa galan raawwatamuusaanii hordofuun dubbistootaaf dhiyeessuudha.
Dhaabbileen hojii odeeffannoo mirkaneessuu hojjetan kunneen miseensota ‘International Fact Checking Network’ (IFCN) dha.